Iindaba - Intsebenziswano eyonwabileyo kwi-IE expo China 2021
Ngo-Epreli 22, IE expo China 2021 igqibile e Shanghai, China. Sisekele ubudlelwane beshishini obuhle kunye nabathengi abavela kwihlabathi liphela ngokufanelekileyo.
Sibonise ezinye iimveliso kuMboniso, njenge Ifayibha yentsimbi yokusika i-laser umatshini wokusika, Umatshini wokusika umbhobho we-laser, ipleyiti kunye ityhubhu laser ukusika umatshinikwaye nangokunjalo. Ngenxa yomgangatho ophezulu kunye namaxabiso okhuphiswano, iimveliso zethu zamkelwe ngabathengi abaninzi. Kwaye abathengi abasekekileyo banike uvavanyo oluphezulu kwinkampani yethu.
IGuohong Laser Technology (Jiangsu) Co., Ltd. ainkampani sa ngokukodwa uphando kunye nophuhliso, imveliso kunye nokuthengiswa umatshini ifayibha laser ukusika. Sinobunjineli kunye nabasebenzi bezobuchwephesha kunye nabaphathi abaphezulu abanamava malunga neminyaka 'kushishino lokusika i-laser.
Ukunyaniseka, umgangatho, uxanduva yeyona njongo yethu iphambili, siya kukubonelela ngeyona mveliso ikumgangatho ophezulu kunye namaxabiso aphantsi. Okwangoku bamkelekile abahlobo abasuka ekhaya kwaye babanzi bathethe ishishini nathi!